Izimonyo Zomzimba | I-Optismile Advanced Dentistry eKapa
I-Cosmetic Dentistry eKapa
Ukuvuselela Ukumamatheka Kwakho
Odokotela bamazinyo bezimonyo eKapa babhekana nokuvela kwamazinyo nokwenza ngcono ukumamatheka komuntu. Amazinyo wezimonyo kuhilela amakhono amaningi nobuciko obukhulu futhi sisebenzisa ubuchwepheshe obumnandi ukusebenza neziguli zethu ukudala ukumamatheka kwazo okuhle. Kungakho futhi kwesinye isikhathi sibhekisa kukho amazinyo wokuhlobisa njengokuqamba ukumamatheka nokusebenzisa ubuchwepheshe bedijithali ukusiza ekuguqulweni okukhulu kokumamatheka kweziguli zethu.
Inqubo ejwayelekile yamazinyo yenziwa ngudokotela wamazinyo wezimonyo eKapa, ​​ngenxa yesidingo ngoba umuntu usezinhlungwini noma engaphathekile kahle, lapho izinqubo zezimonyo zingavami ukuba nomuzwa ofanayo wokuphuthuma. Akusho ukuthi azidingeki, ikakhulukazi ezimeni lapho abantu bezizwa bezenyeza kakhulu ngamazinyo abo noma lapho amazinyo alahlekile kungaholela ezinkingeni zamazinyo ezinzima kakhulu nokuwohloka.
Indlela Udokotela Wamazinyo Ongakusiza Ngayo Ukumomotheka Kwakho
Ngokujabulisayo, kunezindlela eziningi zokwelashwa kwezimonyo ezisheshayo ezingenziwa ngokuvakasha okukodwa kudokotela wamazinyo wezimonyo eKapa, ​​kube nemiphumela emangalisayo! Lezi zinqubo zomzuzu wokugcina zizokubheka isithombe esifanele ngesikhathi somcimbi wakho olandelayo.
Izinhlobo Zezimonyo Zamazinyo?
Izinqubo ezivame kakhulu ezisetshenziselwa ukwenziwa kwamazinyo wezimonyo zingaba lula, kepha ezinye ziyinkimbinkimbi futhi zidinga ukunakekelwa okukhethekile.
Okufakwayo, Okufakwa kokunye nokokumbondelana
Eyaziwa nangokuthi ukugcwaliswa okungaqondile (kudalwe nge I-CEREC technology), asetshenziswa lapho izinyo linokubola okuphakathi kuya kokulingene noma kungekho ukwakheka kwamazinyo okwanele ukuxhasa ukugcwaliswa. Kuncike ekutheni akukho monakalo kumaphoyinti amazinyo, okufakwayo kufakwa ngqo ebusweni bezinyo. Kodwa-ke lapho amaphuzu omqhele noma ingxenye enkulu yezinyo yonakele kusetshenziswe imbondela noma imbondela esikhundleni sokumboza yonke indawo yezinyo.
Okufakwayo nokufakwa okwehlwini kwenziwa e-OptiSmile kusuka kokuhlanganisiwe kwe-resin material futhi kunamathiselwe emazinyweni ngosimende wamazinyo wokunamathisela. Banikeza ukusekelwa ukuze uqinise amazinyo akho, ubuyise ukwakheka kwawo futhi ugweme noma yikuphi ukuwohloka okuqhubekayo noma ukubola.
Ukuhlanganiswa okuyinhlanganisela kusho ukulungiswa kwamazinyo abolile, awonakele noma aqhakazile kusetshenziswa izinto ezifana nombala woqweqwe lwawo. Kwa-OptiSmile sisebenzisa eyethu Isibonakhulu seLeica ukuthola inkinga, susa ukubola kwamazinyo bese ufaka inhlanganisela ebusweni bezinyo. Lokhu kumboza ngempumelelo ukulimala kwezinyo futhi kunikeze ukubonakala kwezinyo eliphilile endaweni yalo. Ukubhondisha kungenye yezinqubo zokubiza amazinyo ezingabizi kakhulu ezitholakala ezigulini ezinokubola kwamazinyo, ezisikiwe, eziqhekekile noma amazinyo aphukile.
Ubuciko bokusebenzisa i-resin eyinhlanganisela emazinyweni akho, ukuze kulungiswe amazinyo ngezinkinga zezimonyo nezakhiwo. Amasu amasha anokuhlasela okuncane - akushiye nesakhiwo sakho sezinyo esiningi nokuqeda okuhle.
Ama-Veneers Ingabe ngokuyisisekelo amakepisi enzelwe ukumboza indawo engaphambili yezinyo lakho noma amazinyo amaningi. Ama-veneers wamazinyo zenziwa ngazodwana ukuze isiguli ngasinye sifane namazinyo aso emvelo, esiwenzayo sisebenzisa okuthuthukile kwethu I-CAD / CAM ubuchwepheshe. Zibukeka zingokoqobo ngendlela exakile futhi zingaxazulula izinkinga eziningi zezimonyo, njengamazinyo agwegwile, uqweqwe oluqhekekile noma olonakele ngisho nezikhala ezibonakalayo phakathi kwamazinyo amabili. Ama-Veneers asetshenziswa ngaphambili kwezinyo ngalinye kusetshenziswa okunamathiselwe kwamazinyo.
Kumhlophe mhlophe kwenziwa kanye lapho i-plaque, i-tartar kanye neminye imfucumfucu ihlanzwa ebusweni bezinyo ngalinye, kubuyiselwa ukubukeka kwabo kwemvelo. Amazinyo angahlanjululwa ukufezekisa umthunzi olula kakhulu kunalo mbala wokuqala.Ngesikhathi amazinyo eba namabala agqoke ekudleni, eziphuzweni, emithini kanye nemikhuba emibi yomuntu efana nokubhema. Kwa-OptiSmile sinezinketho ezingenziwa kusihlalo noma ekhaya.
Izimila zamazinyo asetshenziselwa ukubuyisela amazinyo ngemuva kokuphuma kwamazinyo. Okokuqala sisebenzisa i- I-Orthophos 3D X-Ray ukubuka nokukhomba iphuzu lokuthi kuzofakwa isikulufu esincane se-titanium emhlathini. Isikulufa sizosebenza njengesisekelo somqhele. Lokhu kufakelwa cishe akuhlukaniswa namazinyo emvelo azungezile, futhi uma ithambo nezicubu ezisekelayo zifakela ukufakelwa, kuvikeleka ngokuphelele endaweni.
Ukumamatheka okuhle kungakwenza uzizwe uqiniseka ngaphakathi kufinyeleleka ngokwengeziwe ngaphandle - inhlanganisela ephelele yokuheha abantu endaweni yezenhlalo, yobungcweti noma yothando. Ngokushintshwa kokumamatheka, odokotela bethu bamazinyo bangakwazi ukubhekana nokukhathazeka okuvamile kwamazinyo ngenkathi ngasikhathi sinye bakunikeze ukuguqulwa kokumamatheka okuphelele. Ukubhalisela ushintsho oluphelele kungazwakala kukhungathekisa, kepha ukwakheka kokumamatheka kwenziwa ngokuhamba kwesikhathi ngochungechunge lwezinqubo ezincane ezigcina zenza amazinyo akho abe mhlophe, aqonde futhi afane kakhulu - ngenkathi ubukeka ungokwemvelo ngokuphelele. Abakwa-detntists bethu babheka izinto ezahlukahlukene ukuze bakunikeze ukumamatheka okuhle; kufaka phakathi ukubukeka kwakho kobuso, ithoni yesikhumba, umbala wezinwele, amazinyo (umbala, ububanzi, ubude, ukuma nokubonisa amazinyo), izicubu zezinsini nezindebe. Ama-makeovers amomothekayo enziwa ngezizathu eziningi futhi enziwa ngendlela oyifisayo ngokusho kokubheka kwakho okuhlukile.
Ngokuya ngemiphumela oyifunayo, sizoncoma uchungechunge lwezinqubo zezimonyo nokusebenza. Izinqubo ezivame kakhulu ezifakwe ekumamatheka kokumamatheka kungamhlophe kwamazinyo, ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe, ukungabonakali kwamazinyo kanye nezimpawu zamazinyo. Sincoma nokufakelwa lapho amazinyo alahlekile. Lezi zinqubo zinemiphumela emangazayo zodwa, kepha zinikeza ushintsho olukhulu ekumoyizeleni kwakho lapho kuhlangene! Ubudokotela bamazinyo besimanje bungakusiza ukuthi ufeze amazinyo obukade uwafuna, noma ngabe ukumamatheka kwakho kunjani. Noma ngabe ufuna ukwenza mhlophe amazinyo akho, ulungise ukumamatheka kwakho, noma ulungise ukungalungi okungalungile okungabukeki-ithimba lethu lizokusiza ukuthi uthole isisombululo.
Kwa-Optismile, sikholelwa lokho kuzimonyo amazinyo kufanele kuthuthukise impilo kanye nokubukeka kokumamatheka kwesiguli. Sisebenzisa izixazululo ezintsha ukuze sithuthukise ukulunywa kwakho nempilo yamazinyo kuyilapho sikunikeza ukumamatheka okukhazimulayo. Uma ucabangela noma yiziphi izinqubo zezimonyo zamazinyo, xhumana ne-OptiSmile manje. Sinethimba lamazinyo eliqeqeshwe kakhulu elinobuchwepheshe bakamuva bamazinyo obutholakalayo bokwenza noma yiziphi izinqubo zezimonyo ezingenhla.
Ibiza Kangakanani Izimonyo Zamazinyo eNingizimu Afrika?
Amanani aboniswe lapha yizilinganiso. Kungaba ngcono ukungena kulo mkhuba ukuze kuboniswane ukuze kuhlanganiswe imali ekhokhwayo